Kulan aan caadi ahayn, oo ka dhacay Xarunta Amisom (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Kulan aan caadi ahayn oo ka dhan ah Ururka Al Shabaab, ayaa waxaa uu ka dhacay Xarunta Taliska Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee Xalane. Xalane waxay ku dhex taallaa Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Kulankaan, ayaa waxaa ka soo qaybgalay Madaxda Saraakiisha Ciidamada Somaliya, Midowga Afrika, Ra’iisal Wasaare Ku Xigeenka Somaliya, Maxamed Cumar Carte, Ku Xigeenka Wakiilka Qaramada Midoobe ee u qaabilsan arrimaha Somaliya, Raisedon Zenenga iyo dhinacyada shisheeye ee taageera Dowladda Somaliya.
Dhinacyadaan, ayaa waxay kulanka ku jeex jeexeen sidii kor loogu qaadi lahaa gulufka militari ee ka dhanka ah Ururka Al Shabaab, si Dowladda Somaliya kaga adkaato Ururkaasi.
Taliyaha Ciidamada Amisom, General Cismaan Nuur Subagle oo kulanka goobjoog ka ahaa, ayaa sheegay inay samayn doonaan wax kasta oo karaankooda ah, iyagoo la hawlgalaaya Ciidanka Qaranka Somaliyeed.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, General Maxamed Aadan Axmed, ayaa waxaa uu Taliska Amisom uu ugu yeeray in si dhab ah loo wajaho dagaalka lagula jiro Ururka Al Shabaab, si loo soo afjaro abaabulka weerarada ay dalka ka wadaan.
General Maxamed Aadan Axmed, ayaa codsaday in Ciidamada Somaliya, Amisom iyo deeq bixiye-yaashaba ay si wadajira, uga dhabeeyaan hawlgalka ka dhanka ah Al Qaacidada Somaliya.
Ra’iisal Wasaare Ku Xigeenka Somaliya, ayaa ku waramaaya in Shabaabku yihiin cadowga nolosha aadanaha, muhiimna ay tahay in laga saaro dalka oo dhan, si khatartooda gobolka ay meesha kaga baxdo.
Xubno kale oo kulanka ka hadlay, ayaa waxay muujiyeen inay ka go’an tahay in laga mira-geliyo axdiga hawlgalkaan, si natiijadiisa ay u gaaraan.
Kulankaan, ayaa waxaa uu ku soo beegmayaa, xilli Ururka Al Shabaab ay muddo toddobaad ihi weeraro waawayn kaga fuliyeen Magaalada Muqdisho.
Weerarada Shabaab waxaa la dhihi karaa waxay ku soo uruureen qaraxyo ismiidaamin ah, oo Caasimadda Muqdisho ay ka gaystaan.
Somaliya waxaa lagu wadaa inay sanadkaan ka dhacdo doorasho, xilli baqdin laga qabo weeraro ka dhan ah doorashada oo Shabaabku ka gaystaan dalka.
Amiirka Ururka Al Shabaab, Sheekh Axmed Cumar (Abu Cubeydah), ayaa bishii hore ee July ku cago jugleeyay inaanay yeeli doonin waxa uu ugu yeeray doorasho dimoqraadi ah oo ka dhacda Somaliya.